Horumar laga sammeeyay baarista cudurka kansarka. - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Horumar laga sammeeyay baarista cudurka kansarka.
La daabacay torsdag 20 oktober 2011 kl 10.26
Cilmi baare ka tirsan jaamacadda Lund iyo labo cilmi baare oo u kala dhashay dalka Faransiiska iyo Talayaaniga ayaa markii ugu horreysay daah rogay jiritaanka unug afka qalaad lagu yiraahdo (mutation) oo ah unug jirka ku jira oo si deg dega isku bedela kaasi oo kordhiya qatarta cudurka kaankarada ee ku dhaca maqaarka iyo kelyaha.
Ogaashaha jiritaanka unugan ayaa horseedi karaa in la helo qaab cusub oo lagu daweeyo oo la dhaho talo bixinta dhaxalka xagga firka lagu kala helo iyada oo tani loola jeedo in dhaqaatiirta ay sheegi karaan cida u halis ah qaadista cudurka kaankarada iyo in ay fududaato in baaritaan hore lagu sammeeyo cudurka oo sahli karta daweyn wanaagsan.
Håkan Olsson oo ah professor ka tirsan jaamacadda Lund ku xeel dheereya daweynta cudurka kansarka ayaa sheegay inku dhowaad toban boqolkiiba dadka uu ku dhaco cudurka kansarka in uu ku yimaado dhaxal ahaan.